88 New Generation Students: February 2012
88-generation students volunteer to help end Kachin conflict
Tuesday, 28 February 2012 16:52 Ko Pauk
New Delhi (Mizzima)– The 88-Generation students who arrived at Myitkyina in Kachin State on Thursday have offered to help brokerapeace deal between ethnic groups and the government. The group issuedastatement to the media titled “Myitkyina Echo for Peace in Kachin State.”
The four-point statement said that greater cooperation is needed between all parties to allow humanitarian relief supplies to reach displaced refugees as quickly as possible.
According to the statement, the 88-Generation students believe the country’s problems are two fold: ethnic issues that prevent nationwide peace and the lack of sufficient economic development throughout the country. Only with peace can economic development progress, it said.
The statement acalled on both sides “to holdapolitical dialogue as soon as possible to end the civil war and to establish genuine peace.”
Mya Aye,amember of the 88-Generation student group, said the group, which is comprised of many former political prisoners, is ready to mediate between the Burmese government and the Kachin Independence Organization (KIO) to achieveacease-fire in Kachin State.
National League for Democracy chairman Aung San Suu Kyi, who campaigned in Namti in Kachin State on Thursday, has also offered to mediate between the two sides.
Fighting resumed in mid-summer and negotiations between the two sides has progressed slowly. Up to 50,000 war refugees are estimated to have been displaced by fighting in ethnic areas. So far, onlyasmall amount of organized international aid has been allowed access to the refuges.
The group’s leaders were invited to visit Myitkyina Township to attendaprayer ceremony to mark the suspension of the Myitsone Dam Project.
An organizer told Mizzima that 88-generation students and Rangoon journalists were invited because the two groups were involved in activities urging the government to stop the dam project.
“Their visit will mean that Kachin war refugees might receive their help. They were involved in activities urging [the government] to stop the dam. I hope that they can be involved in activities to try to establish peace in Kachin State,” an organizer said.
Mya Aye told Mizzima that 16 leaders of the 88-Generation group, including Min Ko Naing, Ko Ko Gyi, Htay Kywe, Min Zeya and Jimmy have expressed support and sympathy for the war refugees.
“Our objective is not just to attend the ceremony. Although we don’t have any money or materials to give to the war refugees, we can give them mental support,” Mya Aye said.
Posted by Thinzar at 15:36
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ မန္တလေးမြို့ ခ၇ီးစဉ် ( ၂၈ - ၀၂ -၂၀၁၂)
Posted by Thinzar at 15:25
၈၈တို့ ၇ဲ့ မြစ်ကြီးနား ပဲ့ တင်သံ
ကိုပေါက် | အင်္ဂါနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၅၀ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ ရောက်ရှိနေသည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများက ၎င်းတို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောထားတရပ်ကို အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
‘ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မြစ်ကြီးနား ပဲ့တင်သံ’ တွင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်သွားရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
အချက် လေးချက်ပါ အဆိုပါစာတွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များထံ အကူအညီများ ချောမွေ့စွာရောက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ လိုအပ်ပြီး လက်ရှိပဋိပက္ခနှင့် အနာဂတ် တိုင်းရင်းသားများ၏ လူမှုဘဝလုံခြုံရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာ တိုင်းပြည်၏ လက်ငင်းပြဿနာများဟု ၈၈ ကျောင်းသားများက ရှုမြင်သည်။
ထို့အတွက် “ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရန်နှင့် စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှုသည့် နိုင်ငံရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်သွားရန်” တိုက်တွန်းထားသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ကတည်းက ကချင်ပြည်နယ်သို့ ရောက်ရှိနေသော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် များမှာ မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့အကြား အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် ကြားဝင်
စေ့စပ်ပေးရန် အဆင်သင့်ရှိနေကြောင်း ကိုမြအေးက ပြောသည်။
“စစ်ရပ်ဆိုင်းဖို့အတွက် အစိုးရကိုရော KIO ကိုရော ကျနော်တို့ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ ကျနော်တို့ကို ဘယ်သူကဘဲ ခိုင်းမယ်ဆိုရင် လုပ်ဖို့ ကျနော်တို့ အသင့်ပါ။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်တယ်။ ကြားဝင်ပေးဖို့ လိုလား တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဝင်မှာပါ”ဟု မဇ္ဈိမနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့စဉ် ပြောသည်။
ထို့ပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ပါတီစည်းရုံးရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ရန်အတွက် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့က နမ္မတီးမြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ် “စစ်မှန်သည့် ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ် ပြန့်ပွားစေချင်လို့” ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
Posted by Thinzar at 15:24
ကချင်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေး ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုဟု ၈၈ အဖွဲ့ ပြော
By featured, လင်းသန့် on February 23, 2012 5:57 pm in သတင်း / no comments, Hits: 1,094
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက ကချင်ပြည်နယ်တွင်း ခိုင်မာသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပေါ်ထွန်းစေရန် ပေါင်းကူး ပံ့ပိုးပေးလိုကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့အနီး မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရသည့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ ကျေးဇူးတော် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြား၍ သွားရောက်ကြသော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများက ထိုသို့ ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ကိုမြအေး၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုဌေးကြွယ်နှင့် ကိုအံ့ဘွယ်ကျော် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
“ကျနော်တို့ ၈၈ က ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ အထက်နဲ့အောက်ခြေကြားမှာ ပေါင်းကူးပေးချင်တယ်။ ကျနော်တို့ တံတား ထိုးပေးချင်တယ်။ အဓိက အဲဒီအလုပ်ကို ၈၈ က ကြားဝင်ပြီးတော့ ဒီကွက်လပ်ကို ၀င်ဖြည့်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်”ဟု ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
အစိုးရနှင့် ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA) တို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ဖြစ်စဉ်ကို ပိုမို၍ ချောမွေ့ မြန်ဆန်ရေး အတွက် အခွင့်အလမ်းရလျှင် မည်သည့် ပုံစံမျိုးနှင့် ဖြစ်စေ ပံ့ပိုးကူညီချင်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ကျေးဇူးတော် အခမ်းအနားကိုစီစဉ်သူ ဒေသခံ ပြည်သူများက ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်း သား ခေါင်းဆောင် ၁၈ ဦးတို့အပြင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာများ လုပ်ကိုင်နေသည့် ဦးအုန်း၊ ဒေါက်တာ ကျော်သူ၊ ဒေါ်ဒေ၀ီသန့်ဇင် အစရှိသူတို့ကိုလည်း ဖိတ်ကြားကြောင်း သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်များ၏ အခြေအနေမှန် သိရှိရေး၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ အခြေအနေမှန်များသိ ရှိ ရေးတို့အတွက် ခရီးစဉ်အတွင်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်သားများက ကချင်ဒေသ စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်များ၏ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး အခြေအနေမှန်များကို ဖေဖော်ဝါရီ၂၅ ရက်အထိ လေ့လာသွားရန်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
“အဓိကကတော့ တိတ်နေတဲ့ အသံတွေကို ကျနော်တို့ ကြားချင်တာပါ။ စစ်ပွဲဖြစ်ရင် ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်သူနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြေဇာ ပင်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေကို နားထောင်ဖို့က ပိုပြီး အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်”ဟု ကိုကိုကြီးက ဆိုသည်။
အစိုးရစစ်တပ်နှင့် ကချင်လက်နက်ကိုင်များကြား ဖြစ်ပွားသည့် စစ်ပွဲများကြောင့် စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်များစွာ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်ကို အလေးအနက်စာနာသည့်အတွက် စေတနာရှင်များ၏ အလှူငွေထည့် ၀င် မှုများစုပေါင်း၍ ကျပ် သိန်း ၁၀၀ ကိုလည်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများက လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ခိုင်မာသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များ၊ KIA ခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံ လိုကြောင်း၊ သို့သော် ခရီးစဉ်အတွင်း KIA ခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်ရေးသည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အာ ဏာ ပိုင် အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် မူတည်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ က ပြောသည်။
“KIA ခေါင်းဆောင်များနဲ့ တွေ့ဖို့ မတွေ့ဖို့ဆိုတာကတော့ လက်တွေ့ပြဿနာတွေနဲ့ ဒေသရဲ့အခြေအနေပေါ် မူတည်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်ချင်း စကားပြောတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေက အရင်ကလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အခုလည်း ရှိနေတယ်။ ပိုပြီး ထိရောက် စေချင်တယ်”ဟု ကိုကိုကြီးက ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား ဒေသသို့ ရောက်ရှိနေကြသော ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး အစရှိသည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များသည် ဖေဖော်ဝါရီ၂၆ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့သို့ ခရီးဆက်ကာ မန္တလေးမြို့ရှိ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့မိ မြို့ဘများနှင့် တွေ့ဆုံရန်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့အနီး မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကြောင့် ကျေးရွာပေါင်းများစွာ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပြီး သဘာဝ ပတ် ၀န်းကျင် ထိခိုက်မှုများ ရှိသည့်အတွက် ဧရာဝတီမြစ်ကြီး တိမ်ကောပပျောက်မည့်အရေး မြန်မာနို်င်ငံသားများက စီမံကိန်း ရပ် တန့်ရန် ညီညွတ်စွာဆန္ဒပြခဲ့မှုကြောင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း ရပ်တန့်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ကချင်ပြည်နယ်တွင်း အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် KIA တို့ကြား စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် ဒေသခံ ပြည်သူ သောင်း ချီ ၍ အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရသည်။
အစိုး ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့(KIO)တို့အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်သည်။
Posted by Thinzar at 05:10
88-generation students to visit Kachin State
Tuesday, 21 February 2012 21:27 Phanida
Chiang Mai (Mizzima) – A group of 88-generation student leaders will visit Myitkyina Township in Kachin State to attendaprayer ceremony to mark the suspension of the Myitsone Dam Project.
Left to right, 88-Generation student leaders Jimmy, Hla Myo Naung, Htay Kywe, Min Ko Naing, Ko Ko Gyi, Mya Aye, Min Zaya and Aung Thu atapress conference in Rangoon in January 2012. Photos: Mizzima
The prayer ceremony at Tanhpre village on Friday, near the Myitsone Dam project site, is meant to express gratitude to the government, which suspended the project, and to pray that the project will not be resumed, said Mya Aye, an 88-generation student member.
“We will attend because Kachin young people and Kachin community leaders invited us,” Mya Aye said.
Residents who had to relocate because of the project, young people from Myitkyina and community leaders will participate along with members of all major religions, said organizers.
An organizer told Mizzima that 88-generation students and Rangoon journalists were invited because the two groups were involved in activities urging the government to stop the Myitsone Dam project. While in the area, they may also work to understand the plight of Kachin war refugees, said organizers.
Mya Aye told Mizzima that 16 leaders of the 88-generation students group, including Min Ko Naing, Ko Ko Gyi, Htay Kywe, Min Zeya and Jimmy have expressed support and sympathy for the war refugees.
Mya Aye said the 88-generation student group is readily available to mediate between the Burmese government and Kachin Independence Organization (KIO) to achieveacease-fire and establish peace in the country.
“What can we do for the KIO or the government to end the war? We are readily available to mediate. We want peace. If they want us to help mediate, we will do it,” Mya Aye said.
Meanwhile, sources said that the government and KIO would hold peace talks again in China in late February. Clashes between the two armies took place last week, sources said.
Also, National League for Democracy leader Aung San Suu Kyi plans to campaign in Myitkyina on Thursday and Friday, sources said.
On Saturday,agroup of 88-generation student leaders including Min Ko Naing will go to Mandalay and on February 28, seven 88-generation student leaders including Mya Aye, will return Rangoon.
On September 29, 2011, President Thein Sein ordered the controversial Myitsone Dam project suspended after widespread pubic protests against the project, which is financed by China.
Posted by Thinzar at 10:41
Development Needs Transparent Society: 88 Generation Students
By ZARNI MANN / THE IRRAWADDY Tuesday, February 21, 2012
Leaders of the 88 Generation Students group have urged the public and government to unite and formatransparent society asacrucial factor to achieve development in Burma.
“A society with transparency will drive forward with consideration and consciousness, freedom, openness and honesty. From this, we believe the society will create the main strength to drive the development of the country,” group leader Ko Ko Gyi said inaspeech in Hinthada, Irrawaddy Division, on Monday.
The 50-year-old explained that authorities of every government sector must throw away their fear regarding participation with the public. He added that society today has no transparency and is overwhelmed with fear, while there remainsahierarchical commend system which maintainsagap between the people and the authorities.
Min Ko Naing, another 88 Generation Students leader, also urged those present to remember what unity between people could achieve—especially opposing the planned 6,000-megawatt Myitsone hydropower dam at the Irrawaddy confluence which was recently halted by the new government.
He added that the Students Union is needing foratransparent society as the future of the country is in the hands of its youth, the students, and he highlighted the participation of students in every political movement in the history of Burma.
“The youth and students must have ability and no fear—for example, they must have knowledge and know to point out bravely what they need in their education system, such as request to change the old syllabus which is out of date today,” said Min Ko Naing.
Ko Ko Gyi is now at Thayat, Magwe Division, attending the opening ceremony of the township office of pro-democracy icon Aung San Suu Kyi's National League for Democracy party. He is also meeting with local people and donating food for political prisoners who remain in Thayat prison. The dissident group will also takeatour to Kachin state on Feb. 23.
Meanwhile, Min Ko Naing and the 88 Generation Students launchabooklet of press statements—questions and answers of their press conference in Rangoon—on Tuesday to spread the message of their mission to the Burmese people.
A press release of their January meeting highlighted that they will work with political reformers and support Suu Kyi in the upcoming by-elections scheduled for April 1.
Posted by Thinzar at 10:30
တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရန် ခက်ခဲလာကြောင်း NLD ပြောပြီ
By featured, ဧရာဝတီ on February 20, 2012 3:54 pm in သတင်း / 10 comments, Hits: 3,670
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ လွတ်လပ်စွာ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများကို အာဏာပိုင်များက ကန့်သတ်မှု များပြားလာရာ လွတ်လပ် တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲ တခုဖြစ်ရန် ခက်ခဲလာကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ၏ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ မန်နေဂျာ ရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုလိုက်သည်။
NLD အထူးသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ရှေ့နေဦးဉာဏ်ဝင်း ရှင်းလင်းပြောဆိုနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ရန်ကုန် ရွှေဂုံတိုင်ရှိ NLD ရုံးချုပ်တွင် ယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သော အထူးသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ဦးဉာဏ်ဝင်းက အထက်ပါ အတိုင်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်ရာ၌ အားကစားကွင်းများအတွင်း လုံးဝ မဲဆွယ်စည်းရုံး ဟောပြောမှုများမပြုလုပ်ရန် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ညွှန်ကြားချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း၊ လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ ဘောလုံးကွင်းတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများပြုလုပ်ရန် သက်ဆိုင်ရာက ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်သော်လည်း ၁၄ ရက်နေ့တွင် အားကစားဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်းက အားကစားကွင်းတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်မပြုဟူသည့် အမိန့်တရပ် ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း၊ ထိုအချိန် နေပြည်တော် ရောက်ရှိနေသော ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ ယင်းကိစ္စ ချက်ချင်း တိုင်ကြားနိုင်ခဲ့သဖြင့် နဂိုခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း သုံးစွဲခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ လှည်းကူးခရီးစဉ် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင်ပင် အားကစားကွင်းများအတွင်း မဲဆွယ်ဟောပြောခွင့် မပေးဟူသော ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သောကြောင့် အံ့အားသင့်ခဲ့ ရကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
“ဖျာပုံမှာ အားကစားကွင်း အသုံးမပြုနိုင်အောင် ၀န်ကြီးဦးတင့်ဆန်းက ဟန့်တားတာက တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ တခုဖြစ်ဖို့ ထိခိုက်တယ်။ NLD ပါတီစည်းရုံးရေး ထိခိုက်တယ်လို့ ယူဆတယ်” ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်၊ ၂၄ ရက်နေ့တွင် စီစဉ်ထားပြီး မိုးကောင်းမြို့နယ်ရှိ နန့်တီးကျေးရွာတွင် ဟောပြောပွဲ ကျင်းပခွင့် တောင်းခံရာ လုံခြုံရေး အကြောင်းပြပြီး ကျင်းပခွင့် ပိတ်ပင်ခံနေရကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆက်ပြော သည်။
“လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရရင် ဘာလို့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ သလဲ။ လုံခြုံရေးရှိလို့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာ။ ဟောပြောခွင့်ကိုတော့ လုံခြုံရေး စိုးရိမ်မှုရှိလို့ ဆိုပြီး ပိတ်ပင်တယ်။ ဒါက ကျိုးကြောင်းမဆီလျော်ဘူး၊ ရှေ့နောက်မညီဘူး” ဟု သူက ဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ဖွံ့ပါတီ) က နွားထိုးကြီးရှိ ဘာသာရေးဇရပ်တွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို “အဘွားကြီး” ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည့်အပြင် NLD ပါတီကို ထောင်ထွက်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပါတီဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ကျနော်တို့က ထောင်ထွက်ဆိုပေမယ့် ခိုး၊ ဆိုး၊ နှိုက်လို့၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားလို့ ထောင်ကျတာမဟုတ်ဘူး။ ယုံကြည်ချက် ကြောင့် ထောင်ကျတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ကို အဘွားကြီးလို့ ခေါ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ မပြောဘူး။ ဒါကို သူလက်ခံတယ်” ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ရှင်းပြသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတမှုရှိစေရန် ကြိုတင်မဲများ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ် စေရမည်ဟု ပြောဆိုထားသည့်အပေါ် လေးစားမိကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ တားမြစ်ချက်ကို လိုက်နာသွားမည် ဖြစ်သော်လည်း ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်များအပေါ် ၀န်ကြီးဌာနတခုက ကန့်ကွက်မှုများမှာ မဖြစ်သင့်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် လွတ်လပ်သော ကော်မရှင်တခုဖြစ်ရန် အရေးကြီးကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ အင်းတော်မြို့နယ်တွင် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစောလှိုင်ကို ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အတည်ပြုချက် မပေးဘဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု မလုပ်ရန် အာဏာပိုင်များက ဟန့်တားနေကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ပါတီများ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးနိုင်ပြီဟု ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်သော်လည်း အောက်ခြေ အဖွဲ့အစည်းများက ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်အပေါ် မလိုက်နာကြဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“ကန့်သတ်မှုတွေ များလာတယ်။ ၀န်ကြီးဦးတင့်ဆန်းရဲ့သားကိုယ်တိုင်က ရွေးကောက်ပွဲဝင်တယ်။ နိုင်ရင် ဆုပေးမယ် ဆိုပြီးပြောတယ်။ ဒါက ဥပဒေနဲ့ငြိတယ်။ မဲဝယ်တာ။ ဆုပေးမယ်ဆိုတာ မဲဝယ်တာပဲ။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တရားနည်းလမ်း မကျတာတွေကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို အကုန်တိုင်ကြားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုအချိန်အထိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အဖြေမရဘူး” ဟု သူက ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ဦးဉာဏ်ဝင်းက လက်ရှိ အခြေအနေအတိုင်း ဆက်သွားမည် ဆိုလျင် လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲသည် တရားမျှတသည်ဟု မပြောနိုင်ကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ တရားရေးလောကမှာ ဆိုရိုးစကားရှိတယ်။ အမှန်ကိုလုပ်နေတယ်၊ တရားမျှတအောင် လုပ်နေတယ်လို့ ပြောရုံနဲ့ မပြီးသေးဘူး။ တရားမျှတမှုနဲ့ အမှန်ကို မြင်အောင်ပြနိုင်မှ ဖြစ်မယ်။ လက်ရှိမှာ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ဖို့ အန္တရာယ်တွေ ရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းက သတင်းထောက်များအား ရှင်းပြသည်။
ယခု ရှင်းလင်းပြောဆိုချက်များသည် တရားမျှတမှုရှိရန် ဖြစ်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို တိုက်ခိုက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေသော အခြေအနေများကို ရှင်းလင်း တင်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၀န်ကြီးဦးတင့်ဆန်း၏ အမည်ကို တပ်၍ ပြောဆိုရခြင်းမှာလည်း အစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်သည်ကို နားလည်စေလိုကြောင်း၊ မိမိအနေနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဟု ပြောဆို သုံးနှုန်းခြင်းမရှိသည်ကို သတိထားစေလိုကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက သတင်းထောက်များ ကိုရှင်းပြသည်။
နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာနှင့် နိုင်ငံပိုင် ပစ္စည်းများသုံးစွဲသော နိုင်ငံရေးပါတီများကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာက ပြဋ္ဌာန်းထားသော နိုင်ငံရေး ပါတီများ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအရ အရေးယူရန် တိုင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လတ်တလောတွင် ပါတီတခုက လမ်းခင်း ပေးမည်၊ မီးသွယ်ပေးမည်ဟုဆိုကာ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ ရှိနေကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ယခု အခြေအနေအတိုင်း ဆက်လက်ဖြစ်ပျက်နေပါက NLD အနေဖြင့် မည်သို့ ဆုံးဖြတ်မည်ကို လက်ရှိတွင် မပြောနိုင် သေးကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီတရပ် အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း
ယနေ့ NLD ပါတီ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု (NDF) မှ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးအား NLD ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် လက်ခံလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆိုသည်။
ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးကမူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော NLD ပါတီ၏ လုပ်ဆောင်မှုများကို ကြိုဆို ထောက်ခံသဖြင့် ပါတီကူးပြောင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းအပေါ် “သာကူး၊ မှန်ပြောင်း” အစရှိသည်ဖြင့် ပြောဆို သုံးနှုန်းမှုများအား တုံ့ပြန်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း သတင်းမီဒီယာများကို ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း မြို့နယ်များသို့ နေ့ချင်းပြန် စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်များ သွားရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်သို့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နှင့် ၂၄ ရက်၊ မတ်လ ၄ ရက်နှင့် ၅ ရက်နေ့၊ ၎င်းနောက် မန္တလေးခရီးစဉ် သွားရောက်ရန် အကြမ်းဖျဉ်း အစီအစဉ်ဆွဲထားကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ရှင်းပြသည်။
Posted by Thinzar at 03:04
NLD Complains of Campaign Restrictions
By THE IRRAWADDY Monday, February 20, 2012
Burma's leading opposition party, the National League for Democracy (NLD), has complained aboutaseries of restrictions it has experienced while campaigning for the upcoming parliamentary by-elections in April.
Party spokesman Nyan Win said atapress conference on Monday that the Ministry of Sports did not allow the NLD to use football stadiums during recent tours by its leader, the Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi.
He said that during her campaign to the Irrawaddy delta last week, Suu Kyi arrived atafootball stadium in Phyapone Township which had been pre-booked for her to makeaspeech to local supporters. Authorities refused to allow the ground to be used for the political event, and the rally subsequently had to be relocated to an open areaamile away where the NLD leader was ultimately forced to cut short her speech because her supporters were struggling to cope with the scorching heat.
Nyan Win also expressed concerns about the independence of the Union Election Commission which on Feb. 15 issuedaformal statement banning political parties from using football stadiums for campaign purposes.
He said that the NLD had planned campaign events from Feb. 23 to 24 in Mokaung Township in Kachin State, but was obliged to cancel the rallies as the local authorities did not approve its request on the pretext of security.
“How can you hold an election if you have security concerns? Elections are supposed to be held because there is security. The restriction is quite contradictory,” he said.
Nyan Win hinted at the fact that the military-backed Union Solidarity and Development is violating election laws by using state funds in its campaign efforts.
Although the NLD boycotted parliamentary elections in 2010, it has decided to contest 48 vacant seats in coming by-elections, driven by confidence, it says, in democratic reforms by the new government.
The European Union and the United States have said that the elections will beacrucial test of reforms in Burma, and also suggested the possible lifting of economic sanctions on Burma if the elections are free and fair.
Posted by Thinzar at 03:01
Monday, 20 February 2012 12:51 Mizzima News
Red-robed monks took the lead in the 2007 "Saffron Revolution" in Burma. Photo: Mizzima
Posted by ngs at 02:56
ပင်လုံစိတ်ဓာတ် ရှိရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
By featured, ဧရာဝတီ on February 13, 2012 12:50 pm in သတင်း /4comments, Hits: 2,578
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပင်လုံစာချုပ်အပေါ် အခြေခံသော ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာ စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုကြီးတခုကို ထူထောင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်သည်။
ရန်ကုန် NLD ရုံးချုပ်၌ ကျင်းပသည့် ၆၅ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း ပြောနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
သို့မှသာ တိုင်းရင်းသားများ အကြား တဦးကိုတဦး ယုံကြည်မှု၊ လေးစားမှု၊ သစ္စာရှိမှုများနှင့် ပြည့်စုံသည့် ပြည်ထောင်စုကြီးလည်း ဖြစ်မည်ဟု ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ NLD ရုံးချုပ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် ၆၅ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ပင်လုံစာချုပ်ကို မူတည်တဲ့အခြေခံက ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားအားလုံးကြားမှာ ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ တဦးပေါ်တဦး လေးစားမှု၊ တဦးပေါ်တဦး ယုံကြည်မှု၊ သစ္စာရှိမှုပေါ်မှာ အခြေခံတာပါ။ ဒါကြောင့် အခုထိလည်း တိုင်းရင်းသားများက နောင်ပြည်ထောင်စု တခု ကို စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတခုကို ထူထောင်ဖို့ဆိုတာက ပင်လုံစာချုပ်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ ပင်လုံစာချုပ်ပေါ်မှာ အခြေခံ ရ မယ်လို့ ထပ်တလဲလဲပြောနေတာက ဒီဟာတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်”ဟုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဆိုသည်။
ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးအတွက် လျှောက်လှမ်းရမည့် လမ်းခရီးသည် ကြမ်းတမ်းခက်ခဲမည် ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်ကောင်းများ လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အရေအတွက်အားဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ အင်အား အနေဖြင့်သော် လည်း ကောင်း ဗမာတိုင်းရင်းသားသည် လူများစုဖြစ်ပြီး အခြားတိုင်းရင်းသား အနည်းစုများအပေါ် သဘောထားကြီးမားမှုနှင့် အမြင်ကျယ်မှုရှိရန် အရေးတကြီးလိုအပ်ကြောင်း၊ တသွေးတသံ တမိန့်တည်း ဆိုသော မူဝါဒသည် အာဏာရှင် အရိပ်အငွေ့ပါကြောင်း ၄င်းက
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆက်လက်ပြီး“ကျမတို့ လက်တွဲပြီးတော့ ချီတက်သွားတဲ့အခါမှာ မတူကွဲပြားမှုအပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ ညီ ညွတ်ရေးကို လက်ကိုင်သွားမှာပါ။ မတူကွဲပြားမှုဆိုတာက ကျမတို့က အမှန်ပြောရရင် ကြိုဆိုပါတယ်။ မတူကွဲပြားမှုတွေကြောင့် လည်း ကျမတို့လောကကြီးလည်း ပိုပြီးတော့ စိမ်းစိမ်းလန်းလန်းရှိတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အားလုံး တမျိုးတည်း တသံတည်း တသွေး၊ တသံ၊ တမိန့်ဆိုတာကို ကျမ သိပ်မကြိုက်ချင်ဘူး။ ဒါ အာဏာရှင်ရဲ့အရိပ်အငွေ့တွေပါတယ်လို့ ကျမဒီလိုပဲမြင်တယ်။ မတူကွဲပြား တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ၊ မတူကွဲပြားတဲ့ အမြင်တွေ၊ မတူကွဲပြားတဲ့ ယာဉ်ကျေးမှုတွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ အင်မတန်လှပ တင့်တယ် ပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးတခုကို ထူထောင်ချင်ပါတယ်။ ထူထောင်ဖို့ အတွက်လည်း တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို
မောင်နှမတွေအားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်”ဟုလည်း ဆိုသည်။
၆၅ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားများကို တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ အပါအ၀င် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး ပါတီများကလည်း ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
“ပင်လုံစာချုပ်မှာပါတဲ့ ၊ သဘောတူခဲ့တဲ့ သဘောတူညီချက်တွေကို အာဏာရှင်အစိုးရအဆက်ဆက်က ပျောက်ကွယ်အောင် လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့ စကားကိုပြောတာနဲ့ ခွဲထွက်မယ့် စကားဆိုပြီး အာဏာရှင် အဆက်ဆက်က နှိမ်နင်းခဲ့တယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက် ခဲ့တယ်။ ဒါတွေက စားပွဲဝိုင်းမှာ ဆွေးနွေးရ မှာတွေပါ။ စကားပြောရမှာ။ ညှိုနှိုင်းရမှာ။ လက်နက်နဲ့ ဖြေရှင်းလို့ကတော့ ဘယ်တော့မှ မငြိမ်းချမ်းဘူး။ ဘယ်တော့မှ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုဆိုတာ ဖြစ်မလာဘူး”ဟု တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး ပါတီကြီးတခုမှ ခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က ၆၅ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အထိမ်းအမှတ် သ၀ဏ်လွှာတွင် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး အင်အား မတောင့်တင်းလျှင် အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ အနိုင်ကျင့်မှုများကို တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ ခံကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ
နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေး အတွက် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ ထာဝရ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ် ရှင်သန်ခိုင်မာရေး လုပ်ဆောင် သွားမည်ဟု ပြောဆို ထားသည်။
ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုများနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့က စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးတခု ဖြစ်ပေါ်လာရေး အတွက်၂၁ ရာစုနှင့် ကိုက်ညီသော ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံကြီးတခု ခေါ်ယူသွားပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်မှသာလျှင် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ဦးတည်နိုင်မည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်ပြီး တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ လ ၁၂ ရက်နေ့၌ ပင်လုံမြို့တွင် တိုင်းရင်းသား ညီလာခံ ကျင်းပ၍ ပင်လုံစာချုပ်ကို သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သဖြင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ဗြိတိသျှ လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ကာ လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့သည်။
Posted by Thinzar at 03:50
By featured, လင်းသန့် on February 9, 2012 4:09 pm in သတင်း / 18 comments, Hits: 9,294
အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေ၀င်း၏ တော်လှန်ရေးကောင်စီလက်ထက် မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည့် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်း ၀င်းအတွင်းရှိ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်
အအုံကို ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်း သားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် က ပြောကြား လိုက်သည်။
“အခု ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်နေတဲ့ ခေတ်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွေ ပေါ်ပေါက်နေပြီပဲဗျာ၊ ကျောင်း သား လွှတ်တော်ဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဆိုတာရှိရမယ်။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုတာက အဆောက်အအုံနဲ့ ရုံးခန်းနဲ့ ကျောင်း သားထုအပေါ်ကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ သဘောပဲ”ဟု ကိုမင်းကိုနိုင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ယမန်နေ့က မျိုးဆက် အဆက်ဆက် ကျောင်းသားဟောင်းများ မိတ်ဆုံပွဲကို တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စိတ်တိုင်းကျ လက် ဖက်ရည်ဆိုင်၌ ကျင်းပသည့် အခမ်းအနားတွင် ကိုမင်းကိုနိုင်က ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
မိတ်ဆုံပွဲသို့ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ကျောင်းသားမျိုးဆက်များမှ အစပြုကာ ၁၉၇၄၊ ၁၉၇၅၊ ၁၉၇၆၊ ၁၉၈၈၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အထိ ကျောင်း သားမျိုးဆက်များ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ ကျောင်းသားမျိုးဆက် စုံလင်စွာတွေ့ဆုံမှုသည် နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် ကာလအတွင် ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
ကိုမင်းကိုနိုင်က သမဂ္ဂ ဒေါင်း အလံ လက်ဆင့်ကမ်းမှု သင်္ကေတ ဖြစ်ကြောင်း ဆက်ပြောလိုက်ပြီး မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး သမိုင်းသည် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုနှင့် စတင်ခဲ့ကြောင်း၊ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် ကျောင်း သား ခေါင်းဆောင်များက ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အအုံ၌ လွတ်လပ်ရေးအတွက် အခြေတည်ခဲ့သောကြောင့် သမိုင်း တန်ဖိုး ကြီးမား၍ လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ချိန်ဖြစ်သည့် အချက်တို့ကြောင့်လည်းကောင်း ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက် အအုံ ကို ပြန်လည်ဆောက် လုပ်ပေးရန် လိုအပ်သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်က ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသည် ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်သည့် ကျောင်းစည်းကမ်းများ ရုပ် သိမ်းရေးအတွက် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အအုံ၌ စည်းဝေး ဆုံးဖြတ်၍ ကျောင်းဝင်းအတွင်း လှည့်လည် ဆန္ဒပြခဲ့ကြ သည်။
ထိုသို့ကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြမှုကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်း တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲ နှိမ်နင်းခဲ့ရာ ၁၀ ဦးထက် မနည်း သေဆုံး၍ ဒဏ်ရာရသူ ၅၀ နီးပါးရှိခဲ့ပြီး ကျောင်းသားများစွာ ဖမ်းဆီး ထောင်ချခံခဲ့ရသည့် မှတ်တမ်းများ ရှိခဲ့ သည်။
နောက်တနေ့ ဇူလိုင် ၈ ရက် နံနက်စောစောတွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက် အအုံကို မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း ၌ ထိုကျောင်းသား အရေးအခင်းကို ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် အရေးအခင်းဟု သတ်မှတ် ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးနေ၀င်း၊ ဒု ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ဦးအောင်ကြီး တို့အကြား ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကလည်း လူသိရှင်ကြား အပြန်အလှန် အပြစ်တင်ခဲ့ကြဖူးသည်။
၆၂ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ဦးလှရွှေက“ သမဂ္ဂ ဒေါင်းအလံကို အသက်တွေ၊ ဘ၀တွေ၊ မျက်ရည်တွေ ထုနဲ့ဒေး ပေးဆပ် ရင်း လက်ဆင့်ကမ်းလာကြတာ အခု ၈၈ မင်းကိုနိုင်တုိ့၊ ကိုကိုကြီးတို့ကနေ နောက်ဆုံး ၂၀၀၇ မျိုးဆက်ထိပဲ။ အားလုံးဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့၊ ပေးဆပ်ဆဲ လူတွေချည်းပါပဲ”ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
Posted by Thinzar at 09:37
By last December, the condition of his liver had deteriorated so much that he was sent to Insein General Hospital two times but brought back to his cell without any improvement.
On Jan. 22, nine days after his release, he was on his deathbed. He gestured to his sister, who he affectionately called “Ma Mee,” to give himahug. He tried to say something to her, but his words were inaudible, and then he became silent forawhile.
His legs became cold.
At 12:25 pm, Ko Thet Nwe, 54, died in his big sister's arms, and was free again. But this time—forever.
Posted by Thinzar at 09:27
UN Envoy Says Burma May Allow Election Observers
By AYE AYE WIN / AP WRITER Monday, February 6, 2012
RANGOON — A UN human rights envoy said on Sunday that Burma is considering letting foreign observers monitor April elections that are viewed as crucial for gauging the nation's much-heralded democratic reforms.
The envoy, Tomas Ojea Quintana, praised the “continuing wave of reforms in Myanmar [Burma], the speed and breadth of which has surprised” Burma watchers around the world. Quintana endedasix-day visit to the country on Sunday.
After nearly halfacentury of iron-fisted military rule in Burma,anominally civilian government took office last March. The new government has surprised even some of the country's toughest critics by releasing hundreds of political prisoners, signing ceasefire deals with ethnic rebels, increasing media freedoms and easing censorship laws.
“My mission confirmed thatapositive impact has been made,” Quintana said. “However, serious challenges remain and must be addressed. There is alsoarisk of backtracking on the progress achieved thus far.”
During his trip, Quintana met with senior government ministers, political prisoners and Nobel Peace laureate Aung San Suu Kyi, the longtime political prisoner whose bid foraparliamentary seat has drawn intense international interest.
He called the upcoming polls “a key test” of the government's commitment to reforms.
“I must stress that the credibility of the elections will not be determined solely on the day of the vote, but on the basis of the entire process leading up to and following election day,” Quintana said.
He said that in talks with Burma’s Election Commission, “I was informed that the use of international observers was under consideration.”
Allowing outside monitors would beamajor step for the long-isolated country, where international bids to send observers were rejected in 2010 and 1990, the last two elections.
A string of visiting American officials has also singled out the April polls asameasure of whether the West will lift sanctions that were imposed on Burma during the military junta's rule.
Quintana citedanumber of human rights concerns, noting that authorities continue to detain an unknown number of political prisoners. He urged the government to allow an investigation to determine how many remain behind bars.
Posted by Thinzar at 02:23
၅၁နှစ် မြောက် ကချင် တော်လှန်ရေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသော သဝဏ်လွှာ။
ဒီနေ့ဟာဆိုရင် ကချင်အမျိုးသားထုအတွက် အထင်ကရနေ့ထူး တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့ ၅၁နှစ်မြောက် ကချင်တော်လှန်ရေးနေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ၈၈မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားများအဖွဲ့ အနေဖြင့် အချိန်ပေး စကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက် ကချင်အမျိုးသားများ အစည်းအရုံး (ယူကေ) ကို မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွတ်ဆက်သရင်း ဒီနေ့တက်ရောက်လားသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပထမဦးစွာ ပြောကြားလိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လ ဇန်နဝါရီ ၁၈၊၁၉ ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့မှာ KIA/KIO နှင့် ဗမာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုအပေါ်ကို ကျနော်တို့အနေနဲ့မြော်လင့်ချက်များစွာ ရှိနေပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး လိုအပ်မဲ့ တွေ့ဆုံမှု အဆင့်ဆင့်ကို ပြည်ထောင်စု အဆင့် နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံခြင်းထိ ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့အားလုံးနှင့်အတူ လက်တွဲ့ကူညီဆောက်ရွက်လိုကြောင်း နှင့် လိုအပ်သလို အမြဲပါဝင် ထောက်ပံ့ ကူညီလိုကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်မှာပဲ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ၁၇ နှစ် ကြာ စစ်ပြေငြိမ်းမှု စာချုပ်ပျက်ပြယ်ခဲ့ပြီးနောက် ဇွန်လမှစတင် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကချင်တပ်မတော် နှင့် မြန်မာစစ်တပ်ကြား စစ်မက်များနှင့် ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခအဝဝကို သိရှိရလို့ ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းရ ထပ်တူခံစားရ ပါတယ်။
ယခုလို တိုင်းရင်းသားညီရင်အကို တွေ အချင်းချင်း ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကို အမြန်ဆုံအပြီးသက်ဖို့ အချိန်တန်းပါပြီ။ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ၁၉၄၆ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ မြစ်ကြီးနားသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့စဉ်ကပင် “ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု စနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သွားမှာဖြစ်သလို အမျိုးသား တန်းတူညီမျှရေး ကို အဓိကထား စတင်မြေတောင်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။” ထိုနောက် ကချင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ခေါင်းဆောင်များပါ တက်ရောက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ ပင်လုံစာချုပ်အောင်မြင်ခဲ့ရကာ ပြည်ထောင်စု ဗမာနိုင်ငံတော်ဟာ အင်္ဂလိပ်ထံမှ လုံးဝ လွတ်လပ်ရေးကို အောင်မြင်ရရှိခဲ့ပေတယ်။ သို့သော် တိုင်းရင်းသားတိုင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် ကိုယ့်ကြမ္မာကိုကိုယ် ဖန်တီးခွင့်ကတော့ ၁၉၄၈-၁၉၆၀ကာလ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ စနစ်အောင်မှာ အကောင်အထည် ပေါ်မလာ နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကို အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် KIA/KIO စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရခြင်းနဲ့ ယနေ့လို တော်လှန်းရေး နေ့ ပေါ်ပေါက်လာ ရခြင်း အဓိက နှင့် မူလ သော့ချက်ကတော့ ဗမာ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်းမှု နဲ့ မဆလအစိုးရဖြစ်လာမဲ့ ဦးနေဝင် အာဏာမသိမ်းခင် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနု နိုင်ငံရေးသိမ်းသွင်းမှုအရ ဘာသားရေးကို ခုတုံးလုပ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ မူမမှန်တဲ့ ဗမာ့နိုင်ငံရေး အချိုးအကွေ့တွေကြောင့် ကချင်မျိုးချစ်ခေါ်ဆောင်များရဲ့ မခံမရနိုင်တဲ့စိတ်ဓါတ်မှ ပေါက်ဖွာလာပြီး ကချင်တော်လှန်ရေးတပ်မတော်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ၁၀ စု နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာ စိတ်ဝမ်းကွဲနေကြရပါတယ်။ ဗမာနိုင်ငံအဝှမ်း တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာ တင်းမာမှုတွေ၊ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး မိမိတို့တိုင်းရင်းသားနယ်မြေ ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ ရတဲ့ ဘဝပေါင်းများစွာ၊ အသက်ပေါင်း များစွာတွေလည်း မနည်းတော့ပါဘူး။ ဒီနေ့များမှာ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဆောင်ရွက်လိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးနှင့် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့ ဆန္ဒကတော့ ယင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်များ အောင်မြင်ရေး၊ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံးဆွေးနွေးပြီး စနစ်တကျ အကောင်းအထည် ဖေါ်လာနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ရှင်းလင်ဖို့ လိုအပ်ချက် တစ်ခုကတော့ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စနစ်ပါပဲ။ အချို့သောသူများ ထင်သလို ဖယ်ဒရယ် ဟာ ခွဲထွက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ ပြည်ထောင်စုထဲက ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရှိတဲ့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတစ်ရပ်၊ ကိုယ်ဒေသကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်ပါတဲ့ ဥပဒေရေး နဲ့ ဌာနေအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်။ လွတ်လပ်သော ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲလို့ ရတယ်။ ဒီအပိုင်းက နားလည်မှုကြီးမားရမယ့် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် နဲ့ ကျယ်ဝန်းတဲ့ဥပဒေ အခန်း ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုရဖို့ဆိုရင် တင့်တင့်တဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေခံ အခြေအနေနဲ့ မှုမှန်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုမျိုး လိုအပ်ပါတယ်။ ယနေ့အချိန်အခါမျိုးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည် နဲ့ NLD ပါတီကို အားထားထောက်ခံဖို့ လိုအပ်သလို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အား လည်လိုအပ်နေပါတယ်။ ကိုယ်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ နိုင်ငံရေး ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို အားမလိုအားမရဖြစ်မနေပဲ တစ်ဆိုက်မတ်မတ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေဖို့နဲ့ ဆက်လက်ကာ အားလုံးက ညီညီညွတ်ညွတ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ယနေ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ ခံယူချက်ကတော့ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး စတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်းများ သဘောထားအတိုင်း တိုင်းရင်းသား အရေးဟာ မြန်မာနဲ့ တိုင်းရင်းသားအားလုံး ပါဝင်တဲ့ တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ အမျိုးသားနိုင်ငံ့အရေး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အတိအကျ ထပ်ဖေါ်ပြရပါလိမ့်မယ်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျာင်းသားများ ၂၁ - ဇန်နဝါရီ -၂ဝ၁၂ နေ့က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့
စာအမှတ် - ၁/၂ဝ၁၂ (၈၈) ပါ အချက်အချို့ကို ကျနော်တို့ ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြောကြားလိုပါတယ်။
၃။ ယနေ့အချိန်အထိ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တို့အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ဦးတည် ကြိုးပမ်းကြရမည့် အချိန်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။
၅။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဖြစ်စဉ်များမှတစ်ဆင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြည့်စုံသော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန် အမျိုးသားအင်အားစု အားလုံးနှင့် လက်တွဲ ဆောင်ရွက်သွားမည်။” ဟု အလေးအနက် ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျနော်တို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး ကလည် တိုင်းရင်းသား အရေး နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေကို အခုလို ရှင်းပြထားတာတွေ ရှိပါတယ်။
“အဲဒါကျနော်တို နိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာဟာ တကယ့် အခြေခံအကျဆုံး ပြဿနာပါ။ အဲဒီတော့ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာကို ဖြေရှင်းတဲ့ နေရာမှာလည်း တကွက်စီ ဖြေရှင်းနေလို့ မရပါဘူး။ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း အားလုံးနဲ့ တပြိုင်တည်း ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကချင်နဲ့ မပြေလည်တဲ့ ကိစ္စဟာ ကချင် ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ၊ ကချင်ပြည်သူ တွေတင် မကဘဲနဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံး နစ်နာနေတာလို့ ကျနော်တော့ မြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာဟာ တနေရာတည်း၊ တဒေသတည်း ကွက်ပြီး လုပ်လို့ ရတဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး၊ အားလုံး တပြိုင်တည်း တပြေးညီ လုပ်ရမယ့် ကိစ္စလို့ မြင်ပါတယ်။”
ကျနော်တို့ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး ဒုက္ခတွေ၊ အကျပ်အတည်းတွေဟာ နိုင်ငံရေး ကြောင့်ဖြစ်တယ်၊ နိုင်ငံရေးဟာ အခြေခံဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံသား တယောက်ချင်းစီဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ မပတ်သက်လို့ မရဘူး၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တပိုင်တနိုင် ပါဝင်ကြမှ ဖြစ်မယ် ဆိုတာကို ကျနော်တို့ အားလုံးက ယုံကြည် ပါတယ်။ ဗမာနိုင်ငံမှာတော့ “အပြောင်းအလဲတွေ” ဖြစ်နေပါပြီ စတင်နေပါပြီ လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နှင့် အစိုးရအဖွဲ့က နိုင်ငံတကာသို့ ထုတ်ဖော်ပြသနေပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာတော့ တိုင်းရင်းသား နယ်မြေတွေမှာ တိုင်းရင်းသား ထောင်ပေါင်းများစွာ စစ်ဘေးဒုက္ခကိုခံစားနေရတယ်။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို လုံးလုံး လက်မလွတ်သေးဘူး၊ အာဏာကို ဖက်တွယ်ထားပြီး လွတ်လပ်သော ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဦးဆောင်နိုင်တဲ့ ဦးဆောင်ရမယ့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ဆိုတာကို အစစ်အမှန် မဖေါ်ဆောင်နိုင်သေးဘူး၊ ရှေ့လျှောက်ရမယ် ခရီးရှည်ကြီးကို လှမ်းမြော်ခွင့်သာ ပေးထားပြီး လက်တွေ့မှာ အနှစ်သာရပြည်ဝတဲ့ ပြောင်းလဲမှုကြီးများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ လက်တွန့်နေပါသေးတယ်။ ဒါတွေကို စစ်တပ်အာဏာ နောက်ခံပြု လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နှင့် အစိုးရအဖွဲ့မှ ထိုက်ထိုက်တန်းတန်း လေးလေးစားစား ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ဖို့ အများအပြား လိုအပ်နေပါတယ်။
ကချင်တိုင်းရင်းသားများ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတွေဟာ ပင်လုံစာချုပ်ပါ တိုင်းရင်းသားများ ခံစားရမယ် အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရဖို့အတွက် အဘက်ဘက်မှ ဆက်လက်ကြိုးစား အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ တိုက်တွန်ပါရစေ။ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(KIA)ဟာ ၁၇ နှစ်ကြာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူချက် ပျက်ပြားခဲ့အပြီး ၂၀၁၁ခုနှစ် ဇွန်လကစလို့ စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲခဲ့တာမို့ တစ်ဖန်ပြန်လည်ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ မွေးရပ်မြေတွေမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်မှု ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတွေပေါ် တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်းနေပါတယ် ဆိုတာကို အမှန်တကယ် ယုံကြည်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတွေရဲ့ ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒကို နားထောင်ပြီး လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခဒဏ် ခံနေရတဲ့ တိုင်းရင်းသားများရဲ့ နစ်နာချက်တွေကို အရေးတယူ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုရပါ လိမ့်မယ်။
နိဂုံချုပ် အနေနှင့် ကျနော်တို့ မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားများ၊ လူငယ်များ အားလုံး ကလည်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျာင်းသားခေါင်းဆောင်များ တိုင်းရင်းသားအရေး အပေါ်မှာ ယုံကြည်ပြီးလျှောက်လှမ်းတဲ့ သဘောထားအတိုင်း တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေအားလုံး အထူးသဖြင့် ကချင်ဒေသအပါအဝင် ကျနော်တို့ ညီအကိုတိုင်းရင်းသားအားလုံး ရသင့်ရထိုက်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ပေါ်ပေါက်လာသည်အထိ အားလုံးနှင့်အတူ အမြဲ လက်တွဲ ဝန်းရံ ကူညီသွားမည်လို့ ကတိသစ္စာပြုပြောကြားပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ (ယူကေ)
Posted by Thinzar at 15:30
88-generation students volunteer to help end Kachi...
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ မန္တလေးမြို့ ခ၇...
ကချင်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေး ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုဟု ၈၈ အဖွ...
Development Needs Transparent Society: 88 Generati...
တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရန် ခက်ခဲလာကြောင်း NL...
၅၁နှစ် မြောက် ကချင် တော်လှန်ရေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသော သ...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများစွာ ဘ၀ပျက်ခဲ့ဟု မင်း...
Former political prisoners host reunion near Rango...